မွတ်ဆလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်စကား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မွတ်ဆလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်စကား
- I am Woman.
Posted by I am Woman. on Dec 21, 2010 in News |3comments
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ သိရှိရန် တင်ပြအပ်ပါသည်ရှင့်
ရန်ကုန်မြို့၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ၂-ရပ်ကွက်ရှိ ကျွန်မတို့ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ဗလီဝတ်ပြုကျောင်းတော်ကြီးမှ ဘာသာရေးငွေများ ထည့်သွင်းထားသည့် ဂေါပကပိုင် ဘဏ်စာအုပ်ကို ဂေါပကမှ မပေးပါဘဲ
“မ.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ ပုဇွန်တောင် ဦးပု” က ဦးပုအမည်ပေါက်အောင် လွဲပြောင်း ရယူထားပါသည်ရှင့်။
ကျွန်မတို့ မွတ်ဆလင်ဘာသာပိုင်ငွေကို စားသူ မ.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ ပုဇွန်တောင်ဦးပုကို အရေးယူပေးပါရှင့်။
အထူးမှတ်ချက်။ ။ သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းပါ ယခင်ငွေသွင်း/ငွေထုတ်သူသုံးမှာ သေဆုံးပြီဆိုခြင်းမှာ မမှန်ပါ၊ ထိုသုံးဦးမှာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါကြောင်း။ စာရွက်စာတမ်းများမှာ JPEG file နှင့် Attached လုပ်ရသည်မှာ ခက်ခဲပါသဖြင့်၊ စာရိုက်၍ တင်ပြပါသည်၊ အကယ်၍ အလိုရှိပါက မေးလ် ဖြင့် တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
စာအမှတ် 373 မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
နေ့စွဲ 15-08-08 ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်
စာအမှတ်၊ ၅/၃-၃၀၀/အလ/မယက (ပဇတ)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
အကြောင်းအရာ။ ကုရ်ဘာနီရံပုံငွေ၊ ငွေစုစာအုပ်ကိစ္စ
၁။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ကူရ်ဘာနီရံပုံငွေ၊ ငွေစုစာအုပ် (အက်ဖ်အက်စ်-၈စ၃)ဖြင့် မြန်မာ့စိးပွားရေးဘဏ်ခွဲ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီး
(၁၀-၇-၉၆) ရက်နေ့အထိ ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး၏ မှတ်ပုံတင်အမှတ်
ဘီအာ-၀၂၂၃၁၇ ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အားလုံးမှာ သေဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ယခင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်သူများမှာ သေဆုံးပြီ ဖြစ်ပါသဖြင့် ငွေစုစာအုပ်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ပြုလုပ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦး၏ လက်မှတ်နမူနာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
စဉ် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် လက်မှတ်
(က) ဦးပု ၉/ တကန (နိုင်) ၈၇၁၈၂၂
(ခ) ဒေါ်ဖြူဖြူအေး ၁၂/ကတန (နိုင်) ၀၀၈၈၂၄
(ဂ) ဦးမြင့်စိုး ၁၂/ဗတထ (နိုင်) ၀၂၂၉၉၆
၃။ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ် (၃)ဦးအနက် (၂)ဦး၏အမည်ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ငွေသွငက်း/ငွေထုတ်ခွင့်ပြုပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ (၇-၈-၂၀၀၈)ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်သော
ကူရ်ဘာနီရံပုံငွေ ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်ရှိ ငွေစာရင်းစာအုပ်သက်တမ်း ဆက်လက်ရှင်သန်ရေးနှင့် ငွေစုစာအုပ် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်သူများ၏
အမည် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေး
အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ တက်ရောက်ကြပါသည်-
ဦးပု ဥက္ကဋ္ဌ၊ မယက
ဒေါ်ဖြူဖြူအေး ဒု-ဦးစီးမှူး၊ ထွေ/အုပ်
ဦးမြင့်စိုး ဌာနခွဲစာရေးကြီး၊ ထွေ/အုပ်
၁။ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ ကူရ်ဘာနီရံပုံငွေ ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်ရှိ ငွေစာရင်းစာအုပ်သက်တမ်း ဆက်လက်
ရှင်သန်ရေးနှင့် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်သူများ အမည်ပြောင်းလဲထုတ်ယူနိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရန်ကိစ္စ
၂။ ကူရ်ဘာနီရံပုံငွေ ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်တွင် ယခင်ငွေထုတ်နေသော အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦူးမှာ ပြောင်းရွှေ့သေဆုံးပြီးဖြစ်ပါ၍ ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်ရန်
အတွက် အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦးအား အသစ်ကို ရွေးချယ်ပြီး လုပ်ငန်းမ်ျားဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦး၏အမည်စာရင်းကို ငွေသွင်း/ငွေထုတ် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ရွေးချယ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
၃။ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။-
(က) ငွေစုစာအုပ် (အက်စ်အက်ဖ်-၈စ၃)တွင် ကူရ်ဘာနီရံပုံ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီငွေများကို ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ပြုလုပ်ရန် အောက်အမည်စာရင်း (၃)ဦးကို
ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်
About I am Woman.
View all posts by I am Woman. →
ရက်စွဲ၊ ၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် .. ကစာဆိုတော့ တော်တော်ကြာနေပြီမှတ်ပါတယ်.။
ငွေဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဘာသာရေးငွေ..ယူထားတာတော့ ..တော်တော်ဆိုးပါတယ်…။
ငွေပမာဏလည်း မတွေ့ရပါလား။ အနီးစပ်ဆုံး ပမာဏလောက် သိရရင် ပိုသတင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ ဒါမျိုးတွေကို နယ်မယက ငှက်ကထတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ မြို့ရံပုံငွေ အားကစားရံပုံငွေ ဘာရံပုံငွေ ညာရံပုံငွေတွေကို သူတို့နာမည်နဲ့ ငွေစုဘဏ်မှာဖွင့်ပြီး အတိုးကို စားကြတာလေ။ မိသူတွေ ပြုတ်တာပဲ။ မပြုတ်သူတွေကတော့ အဆောင်ကောင်းတွေရှိပုံရတယ်။ အခုဒီပို့စ်မှာပြောထားတဲ့ ကိစ္စမှာ ဘာသာရေး ရံပုံငွေဖြစ်တာရယ်၊ မသေဘဲနဲ့အတင်းသေခိုင်းတာတွေရှိတာကြောင့် မယကငှက်ကထကြီးက အရံအတား တခုခုတော့ နောက်ကွယ်မှာ ဆောင်ထားမယ်လို့ သမထအာရုံ နမိတ်မှာပေါ်ကြောင်းပါ။
ဒါကြောင့်ပြောပါတယ်. မ.ယ.က တို့ ရပ်ကွက်သူကြီးတို့ဆိုတာ …ခွေးဝဲစား..တတောင်းစား သူခိုး ဓါးပြ တွေလို့ ကောင်းတဲ့သူလဲရှိချင်ရှိမပေါ့ဗျာ..